News Code : 652933
ကိုယ်တော်၏အမည်မှာ ဟဇရတ်အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ဗင်အေမာမ်မူစာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ဗင်ဂျအ်ဖရ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ဖြစ်ပါသည်။မယ်တော်အမည်မှာ- ဟဇရတ်(သ)ဂျနာဗေနဂ်ျ မာ (သို့) သကသွမ်ဖြစ်ပြီး မိမိခေတ်ကာလ၌ သန့်ရှင်း၊သန့်ပြန့်(ဂုဏ်သတင်း ရှိသူ) အမျိုးသမီးများမှ တစ်ဦးဖြစ်ပေသည်။ကိုယ်တော်၏ ကွန်နီယတ်(လေးစားစွာဖြင့်ခေါ်ဆိုသောအမည်)သည်ကားအဗူလ်ဟစန်(အလိုင် ဟစ် စလာမ်)ဖြစ်ပြီး လကဗ်တော်မှာ ရေဇာဖြစ်ပါသည်။
ဤလကဗ်တော်သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ဖက်တော်မှကိုယ်တော်မီးရှုးသန့်စင်မ ဖွားမည် အရင်ကတည်းက ကိုယ်တော်၏ဘိုး၊ဘေးများထံသို့ သတင်းပေးထားပြီး ဖြစ်ချေသည်။
အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မွေးဖွားရာ ဇာတိတော်သည်ကား တမန်တော်မြတ်ကြီး(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟိုအလိုင်ဟေဝါအာလေဟီ ဝစလာမ်)၏ မြို့တော်မဒီနာရွှေမြို့တော်ဖြစ်ပေသည်။အေမာမ်မိုဟမ္မဒ်သကီ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ တစ်ဦးတည်းသော သားတော်ဖြစ်ပေသည်။သို့သော် အခြား သားတော်၊သမီးတော်များလည်း ရှိကြောင်းနှင့်စပ်လျဉ်း ပြီအမြင်ကွဲလွဲ မှုများ ရှိပေသည်။ဖွားမြင်သန့်စင်သည့် နေ့ထူး နေ့မြတ် ကို ဟဒီးစ်ပါရဂူများ၊သမိုင်းပါရဂူများအနေဖြင့်ဇေလ်ကိုင်အ်သ(၁၁)ရက်ဟီဂျရီ(၁၄၈)ခုနှစ် ဖြစ်ကြောင်းမှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ မယ်တော်သည် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား မွေးဖွားပေးတော်မူပြီးနောက် သွာဟေ ရာဟုအမည်တွင်လေ၏။မယ်တော်သည် သန့်ရှင်းသန့်ပြန့်ပြီး အသိဥာဏ်ရှင် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး အာရပ်လူမျိုး မဟုတ်သော်လည်း မြင့်မြတ် သည့် အမျိုးအနွယ်မှ ဆင်းသက်လာသူ ဖြစ်လေသည်။ရီဝါယတ်တော်၌ လာရှိသည်ကားဂျနာဗေနဂ်ျမာ (ခ)သကသွမ်အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ မယ်တော်မှမိမိအတွက် နို့ထိန်းဖေါ်တစ်ဦး ထားပေးရန်တောင်းဆို ခဲ့လေသည်။(အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ် စလာမ်)သခင် အား နို့တိုက်ရာ၌ ကူညီရန်ဖြစ်ပေသည်။)နို့နည်းနေ၍ အကူအညီလိုပါသလား? ဟူ၍မေးမြန်းကြလေရာ -မဟုတ်ပါ။သို့ သော်သားတော်လေး (အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ကို မွေးဖွားပြီးနောက် လျော့သွားသည့် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်အား တမ်းတမှု၊နမာဇ်များကို ဖြည့်စွက် ဖို့ဖြစ်ပါသည်ဟူ၍ ဖြေကြားတော်မူလေသည်။
ကိုယ်တော်၏စာရိတ္တတော် နှင့် လူထု ဖြင့်
ဆင့်ပြန်ချက်၌လာရှိသည်မှာ-အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင်သည် လူထုနှင့်မတွေ့မည် အလျှင် မိမိကိုယ်ကို သန့်သန့်
ပြန့်ပြန့် ဝတ်ဆင်လေ့ရှိပေသည်။လူထုနှင့် စကားပြောချိန်၌ မည်သူစကားကိုမျှ ဥပက္ခာမပြုခဲ့ချေ။ယုတ်စွအဆုံးမည်သည့် အချိန်၌ဖြစ်စေ သူတစ်ပါး၏ စကားကိုမဖြတ်ချေ။အဆုံးထိ တိုင်အောင်ပြောခွင့် ပေးလေသည်။ထိုနည်းတူစွာ မည်သူကိုမဆို လိုအင်အာသီသကို မိမိစွမ်း အားဖြင့် တတ်နိုင်သမျှ မပြယ်ဖျက်ဘဲ ဖြည့်စွက်ပေးလေသည်။ အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ ဘဝတစ်လျှောက်လုံးတွင် မည်သည့် အခါမျှ အသံကျယ်လောင်စွာဖြင့် ရယ်မောခြင်းကို မတွေ့ခဲ့ရချေ။ရယ်မောတော်မူလျှင်လည်း ပြုံးပြယုံအထိသာ ရယ်တော်မူလေသည်။
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် မိမိကိုယ်ကို အမွေး၊အကြိုင်၊ရေမွေးလိမ်းခြင်းကို ပြုတော်မူသည်။အထူးသဖြင့် လူထု အကြားကြွမြန်းချိန်၌ အမွေး၊အကြိုင်သုံးစွဲခြင်းကို နှစ်သက်တော် မူလေသည်။ကိုယ်တော်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် သူတစ်ပါးအား မြောက်မြားစွာ အကျိုးအမြတ် ပြုခဲ့လေသည်။ဆဒ်ကာ ပေးကမ်းလှူဒါန်းခြင်း အလုပ်ကိုအများအားဖြင့် မှောင်မိုက်နေသည့်ညများ၌ ပြု လုပ်ခဲ့ပေသည်။အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် အလွန်တရာ ကျိုးနွံသူဖြစ်ပေသည်။ရီဝါယတ်တော်၌ လာရှိသည်ကား တစ်နေ့၌လူအ များရေချိုးသည့် ခန်းမဆောင်တွင် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား သိကျွမ်းမှုမရှိသူ တစ်ဦးတစ်ယောက်သည် ကိုယ်တော်အား ပြော ဆိုလေ၏။"ကျွန်တော်ကို ချေးတွန်းပေးပါ။"အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့်လည်း ချေးတွန်းပေးမှုကို စတင်လေသည်။
အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် ၎င်းအမျိုးသားအား ချေးတွန်းပေးနေသည်ကို လူအများမှမြင်ပြီး၊၎င်းအမျိုးသားအား ချေး တွန်းပေးနေသူသည် (သာမန်ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်ကြောင်း) အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ဖြစ်ကြောင်း ပြောပြလေ၏။၎င်းအမျိုးသားသည် စပြီး တောင်းပန်လေ၏။သို့သော် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ၎င်းအား အချစ်၊မေတ္တာထားသည်ကို (သက်သေထူရန်)ဆက်လက်ပြီး ချေး တွန်းပေးခဲ့သည်။ထိုနည်းတူစွာ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် မိမိဧည့်သည်တော်များကို အရမ်းရိုသေ၊အလေးပေး လေးစား လေသည်။
ရီဝါယတ်တော်၌ လာရှိသည်မှာ-တစ်နေ့၌ ဧည့်သည်တော်တစ်ယောက်သည် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ထံရောက်လာ၏။ ထို့နောက် ညပါနေလေ၏။
ညအချိန် ဆီးမီးခွက်သည် လဲယိုင်သွားရာ ထိုဧည့်သည်အနေဖြင့် ဆီးမီးခွက်ကို ပြန်လည်တည့်မတ်ရန်လာလေ သည်။သို့သော် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် ၎င်းကိုပြန်လည်တည့်မတ်ခွင့် မပေးဘဲကိုယ်တိုင် တည့်မတ်တော်မူပြီး၊မိန့်ကြားလေ သည်။
"ကျွန်ုပ်တို့သည် မိမိ၏ဧည့်သည်များကို အလုပ်မလုပ်စေလိုချေ။(ဆိုလိုသည်ကား အရမ်းအားနာတတ်၍ ဖြစ်ပေသည်။ထို့ပြင် ဧည့် သည်များမပင်ပန်းစေလိုသောကြောင့်ဖြစ်ပေသည်။)
ကျော်ကြားသည့် ရီဝါယတ်တော်အရ အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ မင်္ဂလာနှင့်ပြည့်စုံတော်မူသည့် ဘဝသက်တမ်းမှာ(၅၅)နှစ် ဖြစ်တော်မူပြီး ရှဟာဒသ်ဖြစ်တော်မူသည့် ရက်သည်ကား ဟီဂျရီသက္ကရာဇ်(၂၀၃)ဆဖရ်လ၏ နောက်ဆုံးရက်ဖြစ်ပါသည်။လုပ်ကြံသတ်ဖြတ် သူမှာလည်း စစ်မှန်သည့် ရီဝါယတ်တော်အဆိုအရ မာမူး(န)အဘာစီ ဖြစ်ပေသည်။သူ့အနေဖြင့် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား အဆိပ် ကျွေးသတ်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ပေသည်။အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ ဂူဗိမာန်တော်သည် မရ်ှဟဒ်မိုကဒက်စ်ရဇဝီးမြို့၌ရှိတော်မူပြီး ကမ္ဘာကျော် ပေသည်။
အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ လူငယ်ဘဝသည် မြင့်မြတ်မှုများ၊ပညာ အရည်အချင်းများဖြင့် ပြည့်နှက်နေခဲ့၏။လူထုတို့မှာအေ မာမ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ထံ မေးခွန်းများလာရောက် မေးမြန်းလေ့ရှိခဲ့ကြသည်။ဟဇရတ်အေမာမ်ကာစင်(မ)(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင် ကိုယ်တော်တိုင် လူထုအား အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ထံ မေးမြန်းကြရန်မိန့်ဆိုညွှန်ကြားလေခဲ့ ရှိပြီးမိန့်တော်မူသည်မှာ-(ကျွန်ုပ်၏သားတော် ရေးသားသီကုံးထားမှုသည် ကျွန်ုပ်၏ ရေးသားမှုဖြစ်ပေသည်။၎င်း၏ စကားသည် ကျွန်ုပ်၏ စကားဖြစ်ပေသည်။၎င်း၏ စေလွတ်မှု (ခိုင်းစေမှု)သည် ကျွန်ုပ်၏ စေလွတ်မှု (ခိုင်းစေမှု) ဖြစ်ချေသည်။သားတော်၏ မိန့်ဆိုချက် ဟူသမျှသည် အမှန်တရား သာဖြစ် ချေသည်။)တစ်နေ့၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက်သည် အေမာမ်ကာစင်(မ) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား မေးမြန်းလေ၏။"ကျွန်တော် မေးစရာရှိပါ သည်။"ဟဇရတ်(သ)အေမာမ်ကာစင်(မ) (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် မိန့်လေသည်မှာ "မိမိ၏အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ထံမှ မေးပါ လေ"၎င်းပုဂ္ဂိုလ်သည် ပြန်မေးလေ၏။"ဘယ်သူကို အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အဖြစ် ရည်ရွယ် ဆိုလိုပါသနည်း?"
ကျွန်တော်အနေဖြင့် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သည်ကား ကိုယ်တော်မှအပ အခြားသူကိုမသိပါ။"အေမာမ် (အလိုင်ဟစ်စ လာမ်)ပြန်လည် ဖြေတော်မူသည်မှာ-"ထိုအေမာမ်သည်ကား ကျွန်တော်၏သားတော်အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ဖြစ်ပါသည်။ကျွန်တော်
အမည်ဖြင့် မိမိ၏ကွန်နီယတ်ကိုပင် ၎င်း၏ကွန်နီယတ် အဖြစ်သတ်မှတ်ထား ပေသည်။"စွန္နီအိုလမာအဗ်နေဟဂျရ် ပြောကြားရေးသားထား သည်မှာ-
كان بفتي في مسجد رسول لله صلي لله علیه و آله و ھو ابن نبف و عشرین سنه
အဓိပ္ပာယ်-အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် သက်တော်(၂၀)ကျော်ကျော် လောက်အရွယ်၌ပင် တမန်တော်မြတ်ကြီး (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝါအာလေဟီဝစလာမ်)၏ မက်စ်ဂျစ်ဒ်တော်၌ ဖသ်ဝါပေး ခဲ့တော်မူလေသည်။ဇဟ်ဘီ အမည်ရှိအခြား အိုလမာ ယေအဟ်လေစွန္နတ်အနေဖြင့်လည်းရေးသားထားသည်မှာ-"ဟဇရတ်(သ)အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) သည် စွန္နီမဇ်ဟပ်ကြီးလေး ပါး၏ဖကီး(ဓမ္မသတ်ပညာရှင်)များမှ တစ်ဦးဖြစ်သည့် မာလစ်က်ဗင်အနာစ် လက်ထက်၌ ဖသ်ဝါပေးခဲ့ပေသည်။ထိုအချိန်၌ လူငယ် ဖြစ်ပေ သည်။"
မည်သို့ဆိုစေ သမိုင်းစာမျက်နှာသည် အထူးသဖြင့် အေမာမ်များ(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ၏ ကလေးငယ်ဘဝမှ လူငယ်ဘဝ အထိစပ်လျဉ်းပြီး ရေငုံနှုတ်ပိတ်ထား လေ့ရှိကြသည်။အကြောင်းသည်ကား-သမိုင်းရေးဆရာများသည် အသံအပြည့်ထွက်သည့် အကြောင်း အရာအဖြစ်အပျက်များ (နာမည်ကြီးသည့်အကြောင်းအရာ အဖြစ်အပျက်များ (သို့မဟုတ်)အားလုံးစိတ်ဝင်စားသည့် (ဘုရင်၊ရာထူး၊အာဏာ ရှင်)တို့၏ အကြောင်းသာ၊ရေးဖို့ စိတ်ဝင်စားချေသည်။ကြွေးကြော်မှု မရှိသူများ၊ကျော်ကြား၊ကျော်စော အသံများ ထွက်အောင် မလုပ်သူများ
အကြောင်းစိတ်မဝင်စားပေ။အထူးသဖြင့် အချုပ်အခြာအာဏာကို အမှန်တကယ် ရပိုင်ခွင့်ရှိသော်လည်း မတရား အလုခံထားရသည့် အဟ် လေဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) အကြောင်းဖြစ်ပေသည်။ထိုခေတ်ကာလ ပညာရှင်များသည်လည်း မဇ်ဟပ်ခြင်း မတူညီမှု အပေါ်အခြေခံ ပြီးအဟ်လေဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) ကို အထင်သေး၊ဂုဏ်ငယ်အောင် ကြိုးပမ်းခဲ့ပေသည်။
ဤအတွက်ကြောင့် ၎င်းတို့(အဟ်လေဘိုက် (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ ရန်သူများ)အနေဖြင့် လာမည့်မျိုးဆက်သစ် လူငယ်များကို အထူးသဖြင့် အဟ်လေဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ အေမာမသ်တာဝန်ကို အတိအလင်း တာဝန်မယူခင်အချိန် ဖြစ်စေ၊တာဝန်ယူပြီး အချိန် ဖြစ်စေအကြောင်းအရာ တော်တော်များများအား ဖုံးကွယ်ဖို့လုပ်ခဲ့ကြပေသည်။အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)နှင့် ပတ်သက် ပြီးသမိုင်း၌ လာရှိသည်မှာ- အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ငယ်စဉ် တောင်ကျေးကလေးဘဝကပင် ဖခမည်းတော်အေမာမ်
မူစာဗင်ဂျအ်ဖရ်(အ.စ)၏ အထူးဂရုပြုအလေးထားခြင်းကို ခံခဲ့ရပေသည်။အေမာမ် မူစာဗင်ဂျအ်ဖရ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ သာဝကတော် များမှ တစ်ပါးဖြစ်သူ မိုဖွစ်စလ်အနေဖြင့် ပြောကြားသည် မှာ-"ကျွန်တော်အနေဖြင့် အေမာမ်မူစာဗင်ဂျအ်ဖရ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ထံ သွားရောက် ခဲ့ပါသည်။ကိုယ်တော်မှ မိမိ၏ သားတော်အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ကို ပွေ့ထားပြီး၊နမ်းရှုံ့ကာ၊လျှာတော်ကို စုပ်ပေးတော်မူ ခဲ့၏။(တစ်နည်းဆိုရလျှင် အရမ်းယုယကြောင်း ပြဆိုနေလေသည်။)ပြီးနောက် မိမိပခုံးထက်ဝယ် တင်တော်မူပြီး၊မိမိကိုယ်၌ ထွေးပွေ့၊ပိုက် ထားတော်မူ၍ မိန့်တော်မူသည်မှာ-"ကျွန်တော်၏ ဖခင်အားအသင်(အလီရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်))အတွက် စတေးပါ၏။(အာရပ်လူမျိုး များမှာ အရမ်းလေးစား၊ဂုဏ်ပေး၊ရိုသေသည့် အခါသုံးစွဲလေ့ရှိသည့် ဝါကျဖြစ်သလို၊အမှန်တကယ်လည်း ဖြစ်နိုင်ပေသည်။)အသင်၏ မည်မျှ ကောင်းမြတ်သည့်ရနံ့၊၊မည်မျှကောင်းမြတ်သန့်စင်သည့် စာရိတ္တ၊မည်မျှမြင့်မြတ်ကြီးကျယ်မှုသည် ရှင်းလင်း ပြတ်သားနေပါသည်။"
မိုဖွစ်စလ်အနေဖြင့် လျှောက်ထားသည်ကား"ကျွန်တော်သည် ကိုယ်တော်အတွက် စတေးပါ၏။
ကျွန်တော်နှလုံးသား၌ သခင်(အ လိုင်ဟစ်စလာမ်)ကြီးကို အချစ်မေတ္တာ ထားသကဲ့သို့ ဤကလေးငယ်ကိုလည်း အချစ်မေတ္တာ သက်ဝင်နေပါသည်။အခြား မည်သူတစ်ဦး၊ တစ်ယောက်ကိုမျှ ဤကဲ့သို့ချစ်ခင်၊သက်ဝင်မှု မရှိခဲ့ပါ။"အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)မိန့်ကြားတော်မူသည်ကား-"အို-မိုဖွစ်စလ်-သား တော်သည်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ပင်တည်း။ကျွန်တော်၏ဖခမည်းတော်(အေမာမ်ဂျအ်ဖရ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်))၏
"မိုဖွစ်စလ်ပြန်လည်လျှောက်ထားသည်မှာ-"သားတော်သည် သခင်ကြီး(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)နောက်ပိုင်း အေမာမ်ဖြစ်ပါသလား? အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ပြန်လည် ဖြေ ကြားသည်မှာ - ဟုတ်ပါသည်။အေမာမ် ဖြစ်ပါသည်။
မည်သူမဆို ၎င်း၏အမိန့်ကို နာခံကျင့်သုံးမည်ဆိုပါက အမှန်တရားကို ပိုင်ဆိုင်မည် ဖြစ်ပြီး၊မည်သူမဆို ၎င်း၏အမိန့်ကို ဖီဆန်၊ဆန့် ကျင် မည်ဆိုပါက ကာဖေရ် ဖြစ်ချေသည်။"(ဤနေရာ၌ ကာဖေရ်ဆိုသည်မှာ မည်ကဲ့သို့ ဆိုလိုကြောင်း ရှီအာ၊အိုလမာသုခမိန်များထံ မေး မြန်းသင့်ပေသည်။)ဘာသာပြန်ဆိုသူ
ကိုယ်တော်သည် ရက်ရော ပေးကမ်း လှူဒါန်း၊စွန့်ကြဲမှုနှင့်စပ်လျဉ်းပြီး မိမိခေတ်ကာလ၌ ပြိုင်ဘက် မရှိခဲ့ချေ။အာရ်ဖါနေ့များ၌ မိမိ၏ ဥစ္စာ၊ပစ္စည်းများ အားလုံးကို စွန့်ကြဲပေးကမ်း ခဲ့လေသည်။ဖွစ်လ်ဗင်စဟ်လ်အနေဖြင့် ပြောကြားသည်မှာ-"ဤ(ရက်ရော၊လှူဒါန်းမှု၊ စွန့်ကြဲမှု သည်)ဆုံးရှုံးမှု မဖြစ်ပါသနည်း? အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ-မည်သည့်အရာကို မဆိုအလ္လာဟ်အရှင်မြတ်၏ လမ်း၌ လှူဒါန်း ပေးကမ်းခဲ့မည်၊ချီးမြှင့်ခဲ့မည် ဆိုလျှင် ၎င်းအရာကို ဆုံးရှုံးမှု၊နစ်နာမှု စာရင်း၌ မထည့်ရပေ။"တစ်နေ့၌ ပုဂ္ဂိုလ်တစ်ယောက် သည် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား ပြောကြားသည်မှာ-"မိမိ၏ ပျော့ပြောင်းသည့် နှလုံးသားနှင့် အညီ ကျွန်တော်အား ပေးကမ်း စွန့် ကြဲပါလေ။" အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် အဖြေပြန်ပေးသည်မှာ"မဖြစ်နိုင်ချေ။"ထပ်ပြီးပြန်လျှောက်သည်မှာ"ကျွန်တော်၏ ပျော့ပြောင်းသည့် နှလုံးသားနှင့်အညီ ကျွန်တော်အား ပေးကမ်းစွန့်ကြဲပါဟု ဆိုရာ။"အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် "ဒီနာရ်နှစ်ရာ ပေးရန်"အမိန့်ပေးတော်မူလေ၏။
အစ္စလာမ် သာသနာတော်၌ အထူးတိုက်တွန်း နိုးဆော်ထားသည့် ကိစ္စတစ်ရပ်မှာ မရှိဆင်းရဲ၊နွမ်းပါး၊လိုအပ်နေသူများ၏ ဆန္ဒများကို ဂရုပြု၊ဖြည့်စွက် ကူညီပေးဖို့ ဖြစ်ပေသည်။
မရှိဆင်းရဲ နွမ်းပါး၊လိုအပ်နေသူများ၏ ဆန္ဒကို ဖြည့်စွက်ပေးမှုကြောင့် ရရှိမည့် အကျိုးဆုလာဒ်များနှင့် ပတ်သက်ပြီး ကျမ်းတော်မြတ် ကုရ် အာန်၏ အာယတ်တော်များ၊မအ်စူးမ်မီး(န်)(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)၏ အမိန့်သြဝါဒတော်များ၌ အထူးလာရှိပေသည်။လူသားအနေဖြင့် အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ ဘဝသမိုင်းကို အနည်းငယ် လေ့လာကြည့်ရှု့မည်ဆိုလျှင်အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင်ကြီး သည် မရှိဆင်းရဲ နွမ်းပါး၊လိုအပ်နေသူများ၏ ဆန္ဒများကို အထူးတလည်မည်ကဲ့သို့ အကျိုးပြု ကူညီခဲ့သည်ဆိုသည့် ဖြစ်ရပ်မှန်၊အမှန် တရားကို ထင်ထင်၊ရှားရှားသိနိုင်ပေသည်။
မိုအ်မရ်ဗင်ခလာဒ် အနေဖြင့် တင်ပြသည်မှာ- "အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် ထမင်းစားသုံးနေလေသည်။အကောင်းတ ကာ့၊အကောင်းဆုံးဖြစ်သည့် အစားအစာထည့်ထားသည့် ခွက်တစ်ခုအား စားပွဲခင်းမှ ဆွဲထုတ်ပြီး၊မရှိဆင်းရဲသားများကို ပေးကမ်းရန်မိန့် လေ သည်။"
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏သည်းခံမှု၊ခန္တီပါရမီတရား၊စိတ်ရှည် အလောမကြီးမှု၊အနွံ၊အတာခံမှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး မာမွန်၏ အုပ်ချုပ်သည့် ကာလ၊၎င်း၏ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်၊ဖုံးကွက်၊လိမ်လည်ကွက်များ အချိန်နှင့် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား အိမ်ရှေ့မင်း သားအဖြစ် ခန့်ထားပြီး နောက်ပိုင်းအချိန်များ၌ မည်မျှအထိ အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် သည်းခံခဲ့တော်မူကြောင်း၊စိတ်ရှည် အနွံအတာ ခံခဲ့တော်မူကြောင်း ထင်ရှားစွာ သိရှိနိုင်ပါသည်။ဟဒီးစ်ပါရဂူများမှ တစ်ဦးဖြစ်သည့် ယာစေရ်ခိုဒါမ်အနေဖြင့် ဆင့်ဆိုသည်မှာ-သောကြာနေ့၌ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သခင်သည် ဗလီဝတ်ကျောင်းတော်မှ ပြန်လာရာ ကိုယ်တော်သည် ချွေးများ၊ဖုန်မှုံ များဖြင့် ပေလူးနေလေသည်။ထိုအချိန် မိုးကောင်းကင်ဘက် လက်တော်နှစ်ဖက်ကို မြှောက်တော်မူပြီး ဒိုအာတောင်းလေ၏။
"အို-အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်သခင်ကြီး ကျွန်တော်မျိုး၏(မာမွန်၏ နှိပ်စက်ညှဉ်းပန်း၊ဂွင်စဉ်မှုများမှ)လွတ်မြောက်မှုသည် သေခြင်း တရား၌ ရှိမည်ဆိုပါက-အမြန်ဆုံး ဤအချိန်၌ သေခြင်းတရားကို ပေးသနားတော်မူပါ။"ဤရီဝါယတ်တော်အနေဖြင့် မီးမောင်းထိုး ပြနေ သည်မှာ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် အိမ်ရှေ့မင်းသားဘဝ၌ နေခဲ့စဉ် မာမွန်၏ နိုင်ငံရေး လှည့်ကွက်များ၊မကောင်းသည့် ဥာဏ်စဉ်မှုများဖြင့်၊ဒုက္ခ၊သောက ရောက်ခဲ့ရသည်ကို သိနိုင်ပေသည်။ဤခါးသီးမှုများ၊မကျေနပ်မှုများကို အရမ်းသည်းခံပြီး၊တိတ်ဆိတ်စွာ နေခဲ့ပေသည်။ထို့နောက် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ အမိန့်တော်ကို လိုက်နာ ကျင့်သုံးဖို့ရန် အတွက် အမိန့်တော်ကို စောင့်စား သည်းခံခဲ့ တော်မူလေသည်။
ဆင့်ဆိုတင်ပြသည်မှာ-မိုဟမ္မဒ်ဗင်အေဗာဒေဟ် မှ အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား မေးမြန်းလေ၏။"အဘယ်ကြောင့် အမီး ရွလ်မိုမေနီး(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ မိန့်ကြားခဲ့မှုများကို အချိန်ဆွဲခဲ့တော်မူပြီး၊ ရှောင်ကြဉ် ခဲ့ရပါသနည်း?"အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) အဖြေပေးတော်မူသည်မှာ -အသင်၏ အမြင်တွင် ဤအလုပ် (အမီးရွလ်မို မေနီး(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ မိန့်ကြားချက်)ဆိုသည်မှာ အဘယ် နည်း? အကယ်၍ အချုပ်အခြာ အာဏာကို ဆိုလိုခြင်း ဖြစ်ပါက မိမိမူရင်း အတိုင်းသာ နေပါလေ၊အကယ်၍ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အချုပ်အခြာ အာဏာကို ယူခဲ့လျှင်လည်း အသင်သည် ဤအတိုင်းပင် ဖြစ်ပေမည်။သူတစ်ပါးနည်းတူဖြစ်ပေမည်။အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၎င်း ကိုအဖြေပေးပြီး စစ်မှန်သည့် ရုပ်လုံးကို ဖော်ပေးခဲ့ပေသည်။ပြီးနောက် ဆက်လက် မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ ခေလာဖသ်(အုပ်ချုပ်မှု)အား အပြည့်အဝ ၎င်းအား ပြောင်းလဲပေးအပ်ခြင်း မရှိဘဲ၊၎င်းခေလာဖသ်(အုပ်ချုပ်မှု)ကို လက်ခံပါကလည်း အကျိုးအမြတ်ရှိမည် မဟုတ်ချေ။ဤ (အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်))၏ အဖြေကြောင့် ၎င်းမေးမြန်းသူ၏ မျက်နှာသည် ဝမ်းနည်း၊ပူဆွေးသည့် အရောင်များ ထွက်လာလေ၏။
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် မိမိ၏ ခေလာဖသ်(အုပ်ချုပ်မှု)နှင့် စပ်လျဉ်းပြီး မိမိ လမ်းစဉ်ကို မိန့်တော်မူသည်မှာ - မည်သူမျှ အခြားသူတစ်ဦးထက် သာလွန် မြင့်မြတ်မှု၊အရေးပေးခံရမှုကို ရရှိမည် မဟုတ်ချေ။အာဏာပိုင်ဖက်မှ ဥပဒေကို လေးစားမှုနှင့် တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သားမခွဲခြားမှု၊ကိုအပြည့်အဝ လိုက်နာမည် ဖြစ်ပေသည်။တရားမျှတမှု၊ကျောသား၊ရင်သားမခွဲခြားမှုကို လူထု အကြား ကျင့်သုံးရမည် ဖြစ်ပေသည်။ဤလုပ်ရပ်သည် အလွန် အရေးကြီးသည် လုပ်ရပ် တစ်ခု ဖြစ်ပါသည်။
အကြီးအကဲများ၏ အဆို၌ အေမာမ် (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ၏ကြီးကျယ်မြင့်မြတ်မှု
အကယ်၍ တစ်နည်းဆိုရလျှင် ကျွန်တော်တို့အတွက် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ ကြီးကျယ် မြင့်မြတ်မှုအတွက် ကိုယ်တော်၏ အေမာမ်မသ်တည်း သာလျှင် လုံလောက်ပေသည်။သို့သော် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ ကြီးကျယ်၊မြင့်မြတ်မှုနှင့် ပတ်သက်ပြီး အချို့ အကြီးအကဲများ၏ အဆိုတစ်ချို့သည် အများလူထု၏ ဦးနှောက်ထဲ အရမ်းဝင် စေပေသည်။မာမူးမ်ရရှီးဒ်အာဘာစ်စီသည် ပညာအရကြီးမား သည့် နေရာကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ ဖြစ်ပေသည်။သို့သော်လည်း ကိုယ်တော်၏ ရန်သူများမှ တစ်ယောက် ဖြစ်ပေသည်။၎င်းအနေဖြင့် ကိုယ် တော်နှင့် ပတ်သက် ပြီးပြောသည်ကား -
ما اعلم احد افضل من ھذا الرجل علي وجه الارض
အဓိပ္ပါယ် ။ ။ကျွန်ှပ်အနေဖြင့် ဤပုဂ္ဂိုလ်ထက်သာလွန် ကောင်းမွန်သူ တစ်ဦး၊တစ်ယောက်ကိုမျှ ဤပထဝီ မြေကြီး၌ မတွေ့ဖူးချေ။ဂျမားလ် လွဒ်ဒီးန်အဟ်မဒ်ဗင်အလီနဇာပေ၊စာပေ ကျော်ကြားသည့် အမည်အဗ်နေအန်ဗေအနေဖြင့် ဆိုထားသည်မှာ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ် စလာမ်)၏ ကွန်နီယသ်သည် အဗူလ်ဟစန် ဖြစ်ပါသည်။မိမိခေတ်ကာလတွင် အနှိုင်းမဲ့သည့် အဗူသွာလစ်ဗ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သား တော်များမှ ဖြစ်ပေသည်။ထို့ပြင် ဇဟ်ဘီဟု ကျော်ကြားသည့် အဟ်လေ့ဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်)အား ကျောခိုင်းသူ တစ်ဦးမှ အေ မာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)နှင့် ပတ်သက်ပြီးပြောသည်ကား-၎င်းသည် မိမိခေတ်ကာလတွင် ဗနီဟာရှင်၏ ခေါင်းဆောင်ဖြစ်ပြီး၊ခန္တီတ ရားအရှိဆုံး၊အသိဥာဏ်၊ပညာ အရှိဆုံးဖြစ်ပေသည်။
အဗာစဲလ်ဟရ်ဝီး မိမိခေတ်ကာလ၏ အကြီးဆုံးပညာရှင်အနေဖြင့် ပြောဆိုသည်မှာ-အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၊ဗင်မူစာ(အလိုင် ဟစ်စလာမ်)၊အလ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)ပမာပညာ အရှိဆုံး မည်သည့် ပညာရှင်ကိုမျှ မတွေ့ဖူးချေ။အကယ်၍ မည်သည့် ပညာရှင် မဆို ၎င်းအား(အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်))တွေ့မြင် မည်ဆိုလျှင် ထိုပညာရှင် ကိုယ်တိုင်ကျွန်ုပ်ကဲ့သို့ ပင်သက်သေ ခံပေမည်။
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ၏ ပညာအရည်အချင်း
ကိုယ်တော်သည် ပညာအရည်အသွေး အား မိမိ၏ ဘိုးတော် ရစူလ်လေခိုဒါ (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟိုအလိုင်ဟေဝါအာလေဟီဝစလာမ်) ထံမှအမွေရထားခြင်းဖြစ်ပေသည်။ကိုယ်တော်သည်အေလ်မ်နှင့်ဖဇီးလသ်(ပညာနှင့်မြင့်မြတ်မှု)၏ပင်မဖြစ်ချေသည်။အေလ်မ်(ပညာ)နှင့် မအ်ရေဖတ်သ်(အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်ကိုသိရှိနားလည်ခြင်း)ဆည်းပူးလိုသူများမှာကိုယ်တော်ဆီမှ ဆည်းပူးအကျိုး ရယူခဲ့ကြပေသည်။
မဆာအေလ်(ပညတ်ချက်တော်များ)ကို နားလည် သဘောပေါက်ရန်၊အခက်အခဲများကို ဖြေရှင်း ကျော်လွှားနိုင်ရန်၊ကိုယ်တော်ထံမှ အကျိုးအမြတ် အကူအညီယူခဲ့ကြပေသည်။
သမိုင်းစာမျက်နှာမှ မြောက်များစွာသော ကိုယ်တော်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ အေလ်မ်မီမိုနာဇေရေဟ်(အမှန်တရားအတွက် ပညာယှဉ်ပွဲ)၊ဖေက်ရ်(စဉ်းစားတွေးခေါ်မှု)ဆိုင်ရာ ဆွေးနွေးမှုများသည် အစ္စလာမ်ရန်သူများအပေါ် အောင်နိုင်မှုအဖြင့် နေရာယူထားပြီး ဖြစ်ချေသည်။
အီဗရာဟီးမ်ဗင်အာဘာစ်ဆူလီအနေဖြင့် တင်ပြပြောဆိုသည်မှာ -ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား မေးခွန်း၊မေးတိုင်း၊မဖြေနိုင်တာမရှိကြောင်း၊မသိကြောင်းကို တစ်ခါမျှ မတွေ့ခဲ့ရချေ။၎င်းထက် ပိုပြီး ဥာဏ်အရှိဆုံး၊ပညာအရှိဆုံး မည် သူကိုမျှမတွေ့ဘူးချေ။
မာစူမ်အေမာမ်များ (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) များသည် လောက မမက်မောသည့် သူတော်စင်များအနက် အကောင်းဆုံး သူတော် စင်များဖြစ်သည်မှာ သံသယမရှိ မှန်ကန်ပေသည်။လောက၏ အရောင်၊အလက်များ၊တန်ဆာများမှလည်း အလွန်တရာ ရှောင်ကြဉ်ခဲ့သူများ ပင်တည်း။သို့သော် အေမာမ်များ(အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) အမြင်တွင် လောကမမက်မောမှု ဆိုသည်မှာ ရိုးရိုး၊အဝတ် ဝတ်ဆင်ခြင်း၊ရိုးရိုး၊အ စားအစာ၊စားသောက်ခြင်း အထိမဟုတ်ဘဲ၊အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုချက် ပိုမိုကျယ်ပြန့်မှုကို ဆောင်နေပေသည်။အမှန်တကယ်လောက မမက်မော သူဆိုသည်မှာ လောက၏ ပျော်ရွင်မှုများ၊အရသာများကို မိမိ၏ ကိုယ်၊စိတ်၊နှလုံးအပေါ် အုပ်ချုပ်မှု မပေးဘဲ ထိန်းချုပ်ထားနိုင်သူကို ခေါ်ပါ သည်။
((နတ်စ်ရေဒ် ဒိုရရ် )) အမည်ရှိ စာအုပ်တွင် ရာဝီး(ရေဝါယသ်ဆင့်ဆိုသူ)တစ်ယောက်မှ တင်ပြသည်မှာ - ခိုရာစာန် တွင် စူဖီများမှ အုပ်စု တစ်စုသည် အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ထံအခစားဝင်ကြပြီး လျှောက်ထား ကြသည်မှာ အမီးရွလ်မိုမေနီ(မာမူမ်ရရှီးဒ်) သည် အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ် မိမိကိုပေးအပ်သည့် တာဝန်(ခေလာဖာသ်)နှင့် ပတ်သက်ပြီး စဉ်းစား၊တွေးတောကာ ကိုယ်တော်၏အဟ်လေ့ ဘိုက် (အလိုင်ဟေမွစ်စလာမ်) သည် လူသားအားလုံးထက် အေမာမ်မသ်နှင့်၊ရှေ့ဆောင်တာဝန်ကို ခံယူအထိုက်ဆုံးဟု ရလာဒ် ထုတ်ခဲ့ ပေသည်။ပြီးနောက် အဟ်လေ့ဘိုက်(အလိုင်ဟေမွစ်၊စလာမ်)အား သုံးသပ်ရာ ကိုယ်တော်သည် အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်ကြောင်း တွေ့လေ သည်။ဤအတွက်ကြောင့် ခေလာဖသ်၏ တာဝန်ကိုယ်တော်ကို ပြန်လည်ပေးအပ် လိုပါတယ်။လက်ရှိ လူထုအတွက် ရိုးရိုး၊အဝတ် ဝတ် ဆင်ပြီး၊ရိုးရိုး အစား၊အစာ စားသောက်ကာ ရိုးရိုး၊အစီး၊အနင်းဖြစ်သည့် မြည်းကို အသုံးပြုမည့် ရှေ့ဆောင်၊ခေါင်းဆောင် လိုအပ်နေပါသည် ဟု လျှောက်ထား ကြလေသည်။
ရာဝီးအနေဖြင့် ဆက်လက်ပြီး ဆင့်ဆိုသည်မှာ-အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)သည် မှီထိုင် နေရာမှ အမှီကိုလွှတ်ပြီး ထိုင်ကာ မိန့် တော်မူသည်မှာ-((ဟဇရတ်ယူစွဖ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်))သည် နဘီတမန်တော်ဖြစ်ပြီး ၎င်း၏ အဝတ်သည် ပိုးထည် ဖြစ်ပြီး၊ကြယ်သီးသည် ရွှေ ဖြစ်ပေသည်။ထို့ပြင် ဖေရ်အောင်နီများ(ရှိုင်တွာန်များ)၏ မဂျလစ်(ထိုင်ဝိုင်း)တွင် ကောင်းလှသည့် အမှီများကို မှီပြီး ထိုင်တော်မူလေ သည်။အသင်တို့ အရှက်၊တရား ကင်းမဲ့ ကြပေသည်။အသင်တို့ တရားမျှတသည့် အေမာမ်၊ကျောသား၊ရင်သားး၊မခွဲ ခြားသည့် အေမာမ်လို ချင်သည်ဟု ဆိုပြီး အဘယ်ကြောင့် စကား၊အမှန် မဆိုကြပါသနည်း? အကယ်၍ အမိန့်ပေးမှုကို ပြုမည်ဆိုလျှင် တရားမျှတပါစေ။ကတိ ပေးလျှင်တည်ပါစေ။
ဟဇရတ်အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် မိမိ၏ ရှဟာဒတ်ဒ်နှင့် မြှုပ်နှံရာ အရပ်ကို
ဟဇရတ်အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် မိမိ၏ ရှဟာဒတ်ဒ်သည် မာမွန်ကြောင့် ဖြစ်ရမည် ဖြစ်သောကြောင့် အကြိမ် ကြိမ် အထူးအနေဖြင့် သတင်း ပေးတော်မူခဲ့ပေသည်။တစ်ခါ၊တစ်ရံ မိန့်ကြားတော်မူသည်မှာ-ကျွန်တော် ခိုရာစာန်သို့ ခရီးထွက်မည်၊သို့
သော် ပြန်လာနိုင်မည် မဟုတ်ချေ။အကြောင်းသည်ကား မာမွန်သည် ကိုယ်တော်အား အိမ်ရှေ့မင်းသားအဖြစ် မဒီနာရွှေမြို့တော်မှ ခိုရာ စာန်သို့ ဖိတ်ခေါ်ခဲ့သည့် အတွက်ကြောင့် ဖြစ်ပေသည်။ရာဝီးမှတင်ပြသည်မှာ-နှုတ်ဆက်ရန် အတွက်(ဘိုးတော်) ရစူလ်လေခိုဒါ (ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝါအာလေဟီ ဝစလာမ်) ရောင်ဇာတော်ဆီ လာရောက်ပြီး အသံကျယ်စွာဖြင့် ငိုကြွေး တော်မူ လေသည်။
ကျွန်တော်(ရာဝီး)အနေဖြင့် အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား စလာမ် ဆက်သတော်မူပြီး ဖိတ်ခေါ်ခြင်း ခံရသည့် အိမ်ရှေ့မင်း သားရာထူးအတွက် မိုဘာရတ် ပြောကြားခဲ့သည်။အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် မိန့်သည်မှာ- ((ကျွန်ုပ်အား မိမိ၏ ဘိုးတော် ရစူလ်လေခိုဒါ(ဆွလ်လ္လာဟ်ဟို အလိုင်ဟေ ဝါအာလေဟီ ဝစလာမ်)နားမှ ဝေးအောင် လုပ်နေပေသည်၊ကျွန်ုပ်သည် မိမိမွေးရပ် မြေနှင့်ဝေး ပြီး သေရပေလိမ့်မည်။ဟရွန်ရရှီးဒ် ဘေး၌ မြှုပ်နှံခြင်းခံရပေလိမ့်မည်။))ဤအတွက်ကြောင့် ကိုယ်တော်အနေဖြင့် မဒီနာရွှေမြို့တော်ကို စွန့် ခွာတော်မူချိန်၌(မိမိအမျိုးအဆွေများ)ကို ကျွန်ုပ်အပေါ် ငိုကြွေးကြရန် အမိန့် ပေးတော်မူလေ၏။အကြောင်းသည်ကား -မာမွန်အနေဖြင့် အပြင်ပိုင်းအရ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) ကို နှစ်သက်၊မြတ်နိုးကြောင်း ပြပေသည်။နန်းတွင်း အစည်း၊အဝေးပွဲများတွင် အေမာမ် အလီ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ အေမာမ်မာသ်ကို ကာကွယ်ခဲ့ပေသည်။
အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အနေဖြင့် မိမိ၏ အပေါင်းအဖော်များကို မိန့်ကြားလေ့ရှိပေသည်။((မာမွန်အနေဖြင့် မိမိ၏ တရား များဖြင့် အသင်တို့အား မလှည့်စားဖို့ လိုပေသည်။အလ္လာဟ်ဟိုအရှင်မြတ်၏ ကစမ် ၎င်းမှ လွဲပြီး ကျွန်ုပ်ကို မည်သူမျှ လုပ်ကြံ၊သတ်ဖြတ်မည်
မဟုတ်ချေ။ကျွန်ုပ်အနေဖြင့်လည်း ဖူးစာတွင် ရေးထားသည့်(ရှဟာဒသ်)ကို ရရှိရာမှ အပ၊တခြား နည်းလမ်း မရှိတော့ချေ။))ဤအကြောင်း နှင့် ပတ်သက်ပြီး၊အခြား ရာဝီးတစ်ယောက်မှလည်း တင်ပြသည်မှာ ကျွန်တော်အနေဖြင့် ခလီဖာ အဘာစီသည် မစ်ဂျစ်ဒ်ဒေဟရမ်၏ တံခါး ပေါက်တစ်ခုမှ အပြင် ထွက်လာပြီး၊ အေမာမ်ရေဇာ(အလိုင်ဟစ်စလာမ်) မှလည်း အခြားတံခါးပေါက် တစ်ခုမှအပြင် ထွက်လာတော်မူသည် ကို တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ကိုယ်တော်အနေဖြင့် မိန့်တော်မူသည်ကား -
یا بعد الدار و قرب الملتقي ان طوس ستجمعني و ایاه
((အိမ်သည် မည်မျှ ဝေးနေပါသနည်း?တွေ့ဆုံဖို့ မည်မျှ နီးကပ် နေပေသည်။သူစ်မြို့တွင် ၎င်းနှင့် ကျွန်ှပ်သည် ပေါင်းသင်း ဆက်ဆံ ရပေမည်။ဟရွန်၏ ကဗ်ရ်ဘေးတွင် ကျွန်ုပ်(အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)) ၏ ကဗရ်ရှိမည်ဟု သိလိုက် ရပါသည်။))တစ်ခါ၊တစ်ရံ ဟာရွန် မစ်ဂျစ်ဒ်နဗဝီးတွင် တရားဟောနေစဉ် ကိုယ်တော်မိန့်တော်မူသည်မှာ -
تروني و ایاه ندفن في بیت واحد
အဓိပ္ပါယ် ။ ။ ကျွန်ုပ်နှင့်၎င်းသည် တစ်နေရာ တည်းတွင် မြှုပ်နှံခြင်းခံရပေလိမ့်မည်။တစ်ခါတစ်ရံမိန့်တော်မူသည်မှာ-ကျွန်ုပ်နှင့် ဟာရွန်ကို ဤကဲ့သို့ မြင်ရလိမ့်မည်၊ထို့နောက် မိမိ လက်ခလယ်နှင့် တခြားလက်ချောင်း တစ်ခုကို ကပ်ပြလေသည်။ရာဝီးအနေဖြင့် ပြောကြားသည်မှာ-အေမာမ်(အလိုင်ဟစ်စလာမ်)၏ အဓိပ္ပါယ် ဆိုလိုချက်ကို သဘောမပေါက်ခဲ့ရာ ဟာရွန်ဘေးတွင် အေမာမ်ရေဇာ (အလိုင်ဟစ်စလာမ်)အား မြှုပ်နှံချိန်တွင် မည်သည်ကို အေမာမ် ဆိုလိုတော်မူခဲ့ ကြောင်း သဘောပေါက်ခဲ့ပေသည်။